अलग जातिमा राखेपछि रानाथारूमा खुसियाली : RajdhaniDaily.com -
Home प्रदेश अलग जातिमा राखेपछि रानाथारूमा खुसियाली
अलग जातिमा राखेपछि रानाथारूमा खुसियाली
धनगढी । सरकारले नेपालको कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका रानाथारू समुदायलाई अलग जातिका रूपमा सूचीकृत गरेपछि खुसीयाली मनाएका छन् । आफूहरूको वर्षौंदेखिको माग सरकारले पूरा गरेपछि सो समुदायले विभिन्न कार्यक्रम गरी खुसीयाली मनाएका हुन् ।
नेपालको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको यो समुदायलाई यही माघ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अलग जातिका रूपमा सूचीकृत गरेको हो । आफ्नो पहिचानसहित अलग जातिमा सूचीकृत गरेपछि बिहीबार साँझ धनगढीलगायतका ठाउँमा राना थारू समुदायले दीप प्रज्वलन गरे । कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनि राना, कृपाराम राना, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य मालामति रानालगायत रानाथारू समुदायको सहभागिता रहेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले रानाथारूलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरेको कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ का प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनि रानाथारूले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । सांसद रानाथारूले आफूहरूको २०५६ सालमा नै हामीलाई आदिवासी जनजातिमा अलग्गै सूचीकृत गर्न माग गरेको दुई दशकदेखिको संघर्ष अहिले पुरा भएको बताए ।
रानाथारूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिसध तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूले सूचीकरण गरेकामा खुसी व्यक्त गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । योसँगै सूचीकृत मात्र नभई अब अधिकार पनि प्रदान गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
सरकारले विभिन्न जातजातिलाई सूचीकृत गर्दा सुदूरपश्चिमका रानाथारू समुदायलाई अलग जातिका रूपमा सूचीकृत गरेको थिएन । रानाथारू समुदायले सुरुदेखि नै आफूहरूलाई अलग जातिका रूपमा सूचीकत गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
नेपालमा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मात्रै रानाथारू समुदायको बसोबास रहेको छ । रानाथारू समुदायको साढे ३ लाख बढी जनसंख्या रहेको छ ।
पूर्वरानीको जन्मोत्सवमा राजासहितको हिन्दु राज्य माग
राजधानी समाचारदाता - February 19, 2021 0
सप्तरी, राजविराज । सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा शुक्रबार राजावादीहरुले एक कार्यक्रम आयोजना गरि राजासहितको हिन्दु अधिराज्य स्थापनामा जोड दिएका छन् । पूर्वरानी कोमलको ७१ औं शुभजन्मोत्सवको...
प्रदेश ३ राजधानी संवाददाता - February 24, 2021 0
Breaking News राजधानी संवाददाता - February 24, 2021 0
सुरक्षा निकायका प्रमुख र मन्त्रीहरु बालुवाटारमा
Breaking News राजधानी संवाददाता - February 23, 2021 0
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरु र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएका छन् । आज बिहान बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले...
Editor-Picks राजधानी संवाददाता - February 20, 2021 0
Not-to-be-missed एजेन्सी - February 18, 2021 0
प्रदेश ३ राजधानी संवाददाता - February 20, 2021 0
Breaking News रासस - February 19, 2021 0
बैतडी । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको आज दाहसंस्कार गरिने भएको छ । भागरथीको मृत्यु भएको १७ औँ...
नबिल बैंकले विना धितो १ लाख ऋण मोबाइलबाटै दिने
राजधानी समाचारदाता - September 21, 2020 0
बागलुङ । नबिल बैकले नेपालमै पहिलो पटक फोनबाट लोन लिने सुविधा सुरु गरेको छ । डिजिटल बैंकिङ प्रणालीमा प्राथमिकता दिएकोे नबिलले तलबी खाता बाहेक...
उपत्यकाका सांसदहरु आक्रोसित
Editor-Picks महेश्वर गौतम - August 27, 2020 0
काठमाडौं । काठमाडौंबाट प्रतिनिधिसभातर्फ निर्वाचित सांसदहरूले कोरोना संक्रमणका सन्दर्भमा सरकारलाई पटक पटक दिइएको सुझाव सुनुवाइ नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । काठमाडौंबाट प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष र...
चौबिसेको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा ३१ लाख जम्मा
प्रदेश १ रबिन कटेल - May 6, 2020 0
धनकुटा । धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा ३१ लाख भन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र राहत वितरणका...
अध्यादेश कि संसद् अधिवेशनको आह्वान ?
बिचार प्रेमलकुमार खनाल - December 20, 2020 0
संविधानतः संसद्को अधिवेशनको आयोजना ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्दछ । संविधानको धारा ९३ मा एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी...
महामशिवरात्रिमा पाँच हजार प्रहरी खटाइने
प्रदेश ३ राजधानी संवाददाता - February 19, 2020 0
काठमाडौं । महाशिवरात्रिका लागि पाशुपत क्षेत्रमा पाँच हजार प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ । गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण र दर्शनार्थीको सुरक्षाका लागि महानगरीय...
प्रदेश १ रासस - January 18, 2021 0
Breaking News राजधानी संवाददाता - October 23, 2020 0
Editor-Picks दिनेश थापा - February 23, 2021 0
बिचार डा. प्रकाश बुढाथोकी - February 20, 2021 0
Breaking News राजधानी समाचारदाता - February 21, 2021 0
भागरथीको शव बुझ्न परिवारद्वारा अझै अस्वीकार
सीपी लोहिया - February 19, 2021
एजेन्सी - February 21, 2021
डाक्टरको परामर्श शुल्क बढ्दा बिरामी मर्कामा
प्रशान्त वली - February 18, 2021
डा. प्रकाश बुढाथोकी - February 20, 2021
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - February 23, 2021 0